Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Boeing waxay magacawday Sarkaalka Sare ee Maaliyada
Brian West, oo ah muddo dheer maaliyad iyo hogaamiye ganacsi oo khibrad u leh aerospace, wax soo saarka, kaabayaasha, adeegyada macluumaadka caalamiga ah iyo warshadaha kale, ayaa loo magacaabay Boeing CFO cusub.
West waxay hogaamin doontaa dhammaan dhinacyada istiraatiijiyadda dhaqaale ee Boeing, waxqabadka, warbixinta iyo qorsheynta ganacsiga muddada dheer, iyo sidoo kale xiriirka maalgashadayaasha, khasnadda, xakamaynta, iyo howlaha xisaabinta.
West waxay hoos imaan doontaa Boeing President iyo CEO David Calhoun waxayna ka shaqeyn doontaa Golaha Fulinta ee shirkadda.
West wuxuu ku guuleystey Greg Smith, oo horey u shaaciyey qorshihiisa howlgabnimada, laga bilaabo horaantii July.
The Shirkadda Boeing maanta waxaa loo magacaabay Brian West inuu noqdo ku xigeenka madaxa fulinta shirkada iyo madaxa sarkaalka dhaqaalaha laga bilaabo Ogosto 27, 2021.
Doorkan, West waxay hogaamin doontaa dhammaan dhinacyada istiraatiijiyada dhaqaale ee Boeing, waxqabadka, warbixinta iyo qorshaynta ganacsiga muddada dheer, iyo sidoo kale xiriirka maalgashadayaasha, khasnadda, xakamaynta, iyo howlaha xisaabinta. West sidoo kale waxay kormeeri doontaa dadaalka isbeddelka ganacsiga ee shirkadda waxayna lahaan doontaa mas'uuliyadda fulinta shirkadda maalgelinta adduunka ee shirkadda, Boeing Capital Corporation. Wuxuu warbixin siin doonaa Boeing President iyo CEO David Calhoun wuxuuna ka shaqeyn doonaa Golaha Fulinta ee shirkadda.
"Brian waa ku-simaha fulinta ee u adeegaya Boeing-ka soo socda ee CFO marka la eego maareyntiisa maaliyadeed ee la taaban karo iyo waayo-aragnimada istiraatiijiyadeed ee muddada-dheer ee hay'adaha caalamiga ah ee isku dhafan ee ku baahsan aerospace, wax soo saarka iyo adeegyada," ayuu yiri Calhoun. “Waxaan ku faraxsanahay la shaqeynta Brian horey, waana hogaamiye aan caadi aheyn oo khibradiisa howleed iyo u heelanaanta daahfurnaanta daneeyayaasha ay horumarin doonaan dadaalkeena madaama aan sii wadno diiradeena amniga iyo tayada, hagaajinta waxqabadkeena iyo u badalashada shirkadeena mustaqbalka."
Galbeed ayaa ku biiraya Boeing ka dib shaqooyin guul leh oo kala duwan oo ku saabsan doorka maaliyadeed iyo hawlgal ee waayeelka ee ku kala baahsan dhowr warshadood, oo ay ku jiraan aerospace, wax soo saarka, kaabayaasha, daryeelka caafimaadka, adeegyada macluumaadka caalamiga ah, maareynta dhaqaalaha iyo khatarta Wuxuu soo noqday madaxa dhaqaalaha ee Refinitiv ilaa 2018, wuxuuna horey u ahaa CFO iyo madaxweyne ku xigeenka fulinta ee Howlaha Oscar Health Insurance iyo CFO iyo COO ee Nielsen. Nielsen ka hor, West wuxuu 16 sano ku qaatay General Electric, halkaasoo uu ka ahaa CFO ee GE Aviation iyo CFO ee Adeegyada GE Engine. Xilalkiisa hoggaamineed ee maaliyadeed ee dheeraadka ah ee ganacsiyada GE waxay ka koobnaayeen caagagga, gaadiidka iyo tamarta.
West waa xubin xubin ka ah guddiga aasaaska ee urur aan faa'iido doon ahayn oo ku saleysan Connecticut oo hadafkeedu yahay diyaarinta jiilka soo socda ee hoggaamiyeyaasha haweenka ah ee kala duwan ee leh xirfadaha, bulshada iyo isku xirnaanta si ay ugu koraan adduunka. Horay wuxuu xubin uga ahaa guddiga mustaqbalka 5, oo ah hay'ad caawisa ardayda aan haysanin tamarta yar ee Stamford, CT inay gaaraan awooddooda buuxda.
West waxay haysataa shahaadada koowaad ee dhaqaalaha ee Siena College iyo Master ee Maamulka Ganacsiga oo laga soo qaatay Dugsiga Ganacsiga ee Columbia.
West wuxuu ku guuleystey Greg Smith, oo horey u shaaciyey qorshihiisa howlgabnimada, laga bilaabo horaantii July. Shirkaddu waxay magacowday Dave Dohnalek, oo hadda ah ku-xigeenka sare ee Boeing iyo Khasnajiye, doorka ku-meel-gaarka ah ee CFO illaa West ay ku soo biirto shirkadda dhammaadka Ogosto.
"Waxaan rabaa inaan markale uga mahadceliyo Greg waxqabadkiisii ​​fiicnaa ee uu u sameeyay shaqaalaheena, macaamiishayada, jaaliyadaha iyo shirkadeena intii soddon sano ka badan uu ka shaqeynayay Boeing," ayuu yiri Calhoun. Waxaan sidoo kale rabaa inaan uga mahadceliyo Dave inuu qabtay ku-meel-gaadh ku-meel-gaadh ah ururkeenna Maaliyadda. Muddo tobanaan sano ah oo khibrad hoggaamineed fulineed ah oo Boeing ah oo ku saabsan dhammaan khasnadda, xiriirka maalgashadayaasha, qorsheynta maaliyadeed iyo waxyaabo kale oo badan, Dave waa hoggaamiye aad loo ixtiraamo oo wax ku ool ah kaasoo u horseedi doona hagitaankeenna maaliyadeed macluumaad iyo miisaaman inta lagu jiro xilligan kala guurka ah.